Last nohavaozina: Dec. 27 2017 | 5 min namaky
Vehivavy aho, ny vehivavy iray nandeha tamin'ny daty amin'ny olona maro, indray amin'ny andro mampiaraka. Ka nahita ny fihetsika isan-karazany be dia be, hevitra sy fomba mba mampiaraka. Indro, Izaho efa hizara aminareo ny anatiny Scoop momba ny zavatra tena miasa ho an'ny olona niaraka vehivavy, ary koa izay tsy toy ny areti-mandringana, raha ianao avy any amin'ny daty na ny miresaka amin'ny vehivavy.
Ho azo antoka Famerenana ireo ianao Tia Builders
Olon-tiany azy – Isika vehivavy lasa nahasarika ny olona amin'ny alalan'ny mahatsiaro mifandray, izany no maha samy hafa kely ny fomba ny ankamaroan'ny olona miasa ho an'ny mino aho. Noho izany dia afaka ny hihaona ny olona, ​​ary tsy hahatsiaro mihitsy nahasarika, na izany aza rehefa mandany fotoana miaraka aminy dia afaka handresy antsika ny ary ho lavo tanteraka ho azy. Mitranga izany ny fotoana. Ka mampiasa izany. Olon-tiany azy. Aza matahotra hoe tsy toa efa lany andro – Tsy fantatro ny vehivavy iray izay tsy mahatsiaro ho mahagaga raha misy olona mikarakara mba ho tantaram-pitiavana taminy. Izy Mariho ny ezaka fanampiny ianao any amin'ny, ny voninkazo, mitarika indray ny seza, fahazoana ny varavarana sy ny sisa. Na dia tao amin'ny lohany izy mino azy ho efa lany andro, tao am-pony fotsiny izy dia ketraka, ary izay no zava-dehibe ho anao mba hanan-kery!
Manolotra ny vola - Tena mampifandray izany ao amin'ny etsy ambony. Na inona na inona ahantòny amin'io-dehibe ianao momba ny fandoavana Izaho dia manoro hevitra anao nandatsaka azy ireo ny tongony aman-ny volavolan-dalàna raha te hanao tsara ny fahatsapana. Te-hahafantatra antony? Vakio ny lahatsoratra mikasika ny hoe iza no tokony handoa amin'ny daty voalohany.
Midera azy (fa tsy be loatra) - A kely, tena fiderana tena mandeha lavitra mba hanao ny vehivavy mahatsapa tsara, ary mety ketraka na dia ny fo mangatsiaka indrindra. Na izany aza mitandrema ianareo, fandrao ny-manao izany. Afaka tonga manerana ho milamin-tsaina, raha teny hafa rehetra avy amin'ny vavany ary fandokafana.
Ampiasao fahafinaretana ny handrava ny ranomandry - Mampiaraka dia afaka ny ho henjana whilst traikefa ianao mahafantatra azy ka mandika ny ranomandry amin'ny mieritreritra zavatra-tanana sy ny voly, fa tsy feno ny fihenjanana na ny sakafo hariva bar daty izay no mahasakana avy toy ny asa bebe kokoa resadresaka! Mandehana eto: tsy manam-paharoa ho an'ny sasany fiarahana hevitra hevitra lehibe sy namaky eto: drafitra iray mahagaga voalohany daty mba mitady mafy ny fomba hanorenana fifandraisana.
Manorena fihenjanana - Trano sy ny firaisana ara-nofo disadisa gidragidra ny dia Notsapaina sy nosedraina teknika izay efa ela no ampiasain'ny olona mba hampitombo manintona vehivavy iray tiany. Tsy midika ho firaisana ara-nofo ianao Pest, na izany aza kely mahafinaritra, playful filalaovana fitia tena mafana ny zavatra afaka ny. Ny hanihany no fomba lehibe iray hafa mba hanorina simia firaisana ara-nofo raha mbola tsy overdone. Indray mandeha izay aho mitondra ny datin 'ny lehilahy izay nampiasa izany ho toy ny tena fomba hifaneraserana amin'ny vehivavy. Tamin'ny voalohany dia voly, fa rehefa afaka adiny iray na roa dia tsotra nandreraka. Koa, ao anatin'ny fihenjanana trano dia ny mihazona ny amin'ny fiainanao sy ny fahaleovan-tena, na dia rehefa lavo ny vehivavy.
Tsy Ireo fahadisoana Mampiaraka
Ny hoe whiney - Olona izay whine be momba ny zavatra toy izany Vonoy. Tena matotra. Mino aho fa afaka mifandray raha mahafantatra olona iray izay moans ny fotoana rehetra. Mety hieritreritra ianao fa tsy ianao, na izany aza, hijery fotsiny ho izany. Indraindray isika dia mitoloko sy whine tsy ho tsapany izany. No tianao mba mitaraina amin'ny mpivady? No mitoloko ny: ny toetrandro, ny asa, ny toetry ny Toe-karena, ny vehivavy no daty? Mety ho ianao raha manao izany miaraka amin'ny namanao ianao dia manao izany ianao rehefa miaraka, ary mety ho zava-dehibe mametraka ny vehivavy eny. Aoka ianareo ho mahalala izay lazainao ny amin'ny daty, ary ny teny ampiasainao.
Mampiseho lehibe tsy fandriampahalemana - OK izany isika rehetra manana tsy natoky tena, ary Izaho tsy iray ny fihetseham-po noho ny bottling, daty voalohany na izany aza dia tsy ny toerana iasàny na ny tsy filaminana ny raha manintona ianao amin'ny ankizilahy na ankizivavy, satria manome toky aho fa tsy ho ianao raha manao izany! Ny vehivavy hafahafa Mety mahatehotia anefa izay ho vitsy an'isa lehibe. Ho an'ny vehivavy indrindra ho antsika izany nihazakazaka mangatsiaka. Indray mandeha izay aho mitondra ny datin 'ny lehilahy izay nanomboka nanontany ahy raha nihevitra aho izy mahasarika ny daty voalohany, ary ny fomba no naneho ahy izany fa ho avy amin'ny toerana ny tsy fandriampahalemana. Dia tsy hijanona izany. Izy no nanontany ahy, no hahitako azy manintona? Ary avy eo dia nanomboka nanao hoe: tsy nisy teboka mampiaraka raha tsy nahita manintona ary tena mampihomehy dia nahazo momba izany. Ny fahamarinana aho no mbola manao ny an-tsaiko ny zavatra tsapako (tsarovy mahasarika miasa mitovy ho antsika vehivavy) na izany aza isaky ny fotoana voalaza izany ny mahasarika nidina. Amim-pahombiazana dia niresaka ny tenany amin'ny fahazoana daty hafa. Miasa avy ny olana eo amin'ny fitsaboana, na ao an-trano irery, fa tsy amin'ny daty. Mariho ihany koa - tsy natoky tena sy ny fihetseham-po tsy mitovy!
Bitching momba ny taloha - Izany ho ahy no anisan'ny ratsy indrindra meloka ary nanao ahy ho any amin'ny tany iray haingana kokoa noho ny lehilahy tsara sokola mampiempo amin'ny andro mafana. OK, ka ny taloha Mety ho ny lehibe indrindra amin'ny tch b * izao tontolo izao, ary ianareo sisa torotoro fo manan-janaka dimy hampakatra, fa ny vehivavy miaraka ianareo tsy mahalala anao mbola. Raha manomboka ratsy mouthing ny taloha izy dia mifandray bebe kokoa ny taloha noho ny aminareo. Izy koa dia manahy momba ny didim-pitsarana dia manao momba ny. Nitondra ny taloha ny maraina amin'ny mampiaraka dia endrika ratsy fotsiny ary tsy ilaina tanteraka (Raha ny marina dia manao raharaha tsara fa tsy nitondra teo aloha ny an ny fifandraisanareo mandrakizay!) Ny zava-dehibe dia hoe iza ianao NOW, ny vehivavy eo anatrehanao.
Manana lehibe ahantòny amin'io dehibe (ireo mitovy saina mena ho antsika!) - Jereo ny rehetra ny etsy ambony. Ahantòny amin'io dehibe dia afaka koa ny ranting momba ny mahatsiravina ianao daty efa tamin'ny, mitaraina fa tsy hoe anao, satria mahatonga anao hatoky tena, slagging eny rehetra ianao ny daty efa amin'ny, moaning momba ny fandoavana ny volavolan-dalàna sns. Dia ny fotoana hampiasana ny zaza lehibe pataloha amin'ny. Indraindray ny fiainana dia afaka mahita tsy rariny, fa raha te ho tafita eo amin'ny lalao ny mampiaraka ianao indraindray ny mitaiza kely fotsiny azy! Fa raha tsy izany dia ho hanina fotsiny eo amin 'ny juices. Manantena aho fa misafidy ny miala any, Mitete ny ahantòny amin'io-dehibe, ary tia niaraka fotsiny ny fahafinaretana, ampoizina mihitsy, ary indraindray traikefa adala mety ho.
Ary amin'ny farany ...
Adinoy ny rehetra fotsiny ny ambony sy ho anao! - Eny Tena no milaza fotsiny fa. Ny fianarana sy ny fanarahana toro lalana lisitry ny mety hahatonga anao indraindray henjana sy voajanahary amin'ny daty. Koa raha lehibe ny mamaky torohevitra sy mull izany ny mba hamela azy io mba hilentika izany, aza manahy ny fahazoana azy io tanteraka. Niaraka avokoa izy rehetra torohevitra ho toy ny tondrozotra fa tsy ny tena tsy maintsy. Andramo ny zavatra ho an'ny tenanao sy ambonin'ny zavatra rehetra hahatsiaro ny voly fotsiny sy miala voly!